Japanese Cuisine E-Book...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ JAPANESE အစားစာချက်ပြုပ်နည်း တင်ပေးလိုက်တာပါ...! မြန်မာလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး...! SUSHI ချက်ပြုက်နည်းလေးလည်း ပါတယ်...!ချက်ပြုက်နည်းလေးလည်း တော်တော်လေး စုံပါတယ်...!လိုချင်တဲ့ သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! PDF ဖိုင်လေးဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်...! အားလုံးစာမျက်နှာ 100 ရှိပါတယ်...!လိုချင်ရင်တော့ စာအုပ်လေးကို Mediafire လေးဖြင့်အောက်မှာထပ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 70.26 MB )
1 Response to Japanese Cuisine E-Book...!